Nke a bụ nnukwu usoro ịre ahịa email nke m ga-agba onye ọ bụla nọ na Software dị ka ụlọ ọrụ ọrụ iji mejuputa; Agbanyeghị, aga m eme ndụmọdụ ndị a:
Site na akpaghị aka na imejuputa usoro ịre ahịa email dị ka nke a, ị na-enye ndị ahịa gị ngwaọrụ maka ihe ịga nke ọma. Na nloghachi, mmejuputa nke ngwanrọ gi gha eme ka ojiji di nma na nsonaazụ ahia - ohere di uku maka ohere di elu na njigide ndi ahia. Ọ bụrụ na ị mejuputara usoro akpaaka dịka nke a, mee ka m mara. Ọ ga-amasị m ịnụ nsonaazụ ya!